Wararka - Rubuc kasta, badeecooyinka naqshadaynta cusub ayaa lagula talinayaa macaamiisheena si joogto ah waxaanan u haysanaa shatiyada qaar ka mid ah alaabada muhiimka ah.
(Sharaxaad kooban) Saddexdii biloodba mar, badeecadaha naqshadaynta cusub ayaa lagula talinayaa macaamiisheena si joogto ah waxaanan u haysanaa shatiyada qaar ka mid ah alaabta muhiimka ah. OEM & ODM sidoo kale waa la soo dhaweynayaa. Si diiran u soo dhawoow weydiinta aduunka oo dhan. Tuoda waxay ku siin doontaa qiimo tartan oo alaab tayo sare leh si aad faa'iidadaada uga dhigto intii suurtogal ah. Oo hel xalka ugu fiican mashaariicdaada alaabta guriga.
Waqtiga boostada: Sebtembar-06-2021